Edemede Kelsey Cox na Martech Zone |
Edemede site na Kelsey Cox
N'agbanyeghị ụdị ọdịnaya ị na-eke, blọọgụ gị kwesịrị ịbụ ebe etiti maka ire ahịa ọdịnaya niile. Ma olee otu ị ga - esi jide n'aka na etinyere sistemu ụjọ maka ihe ịga nke ọma? Na ihu ọma, enwere ụfọdụ tweaks ndị ga - eme ka nkesa dịkwuo elu ma hụ na ndị na - eso ụzọ gị maara nke ọma ihe ha kwesịrị ime ọzọ. Ọ dị mma ikwu taa na ndị mmadụ na-enwe mmasị na foto. N'ezie, otu isiokwu nwere onyonyo karịrị 2x
Ọ bụ ezie na World Cup enwere ike naanị otu onye mmeri, ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe ọganiihu n'egwuregwu e-Azụmaahịa. Enwere usoro esi enyere aka ndị na-ere ahịa akara. Baynote na egosiputa gi otu ị gha esi egwu ndi egwuregwu kachasi nma ma meputa ihe egwuru-egwu di ike ka i wee nwee ahia e-Commerce ka iweta mmeri. Tupu oge ahụ amalite, ndị otu ga-ebu ụzọ tinye ego na ndị egwuregwu kachasị elu. Abia na e-Azuma ahia 5 nke
N'afọ gara aga, nkezi data mebiri data na-efu ụlọ ọrụ ngụkọta nke $ 3.5M, nke bụ 15% karịa afọ gara aga. N'ihi ya, CIO na-achọ ụzọ iji chekwaa data ụlọ ọrụ ha na-echekwa ma na-ebelata ọnwụ nke ndị ọrụ. Ping Identity na-ewepụta eziokwu banyere ahịa nchekwa njirimara ma na-enye azịza maka otu ụlọ ọrụ ga-esi nwee ike nweta nchekwa echekwara na infographic dị n'okpuru. Ihe mgbochi data nwere mmetụta na-adịghị mma na ndị ahịa
Ọnụ ọgụgụ onye na-ere ahịa na-edekọ ihe karịrị awa 2,000 kwa afọ na nkwukọrịta azụmahịa, nke ka ukwuu n'ime ọrụ ndị metụtara ọrụ (39%) na ịgụ / aza ozi ịntanetị (28%). Ọ bụ ezie na ọ ga-adị ka mgbasa ozi mmekọrịta ọhaneze na-aghọ usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu, ebe 72% nke ụlọ ọrụ na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe n'ụdị ụfọdụ, email ka bụ ihe kachasị amasị n'etiti azụmaahịa gburugburu ụwa. Dabere na Akuko McKinsey Global Institute Report, a na-edezi ozi ịntanetị 87 kwa ụbọchị. Nke ndị America
Google kpebisiri ike na n'otu ụbọchị, 90% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ọtụtụ ngebichi iji gboo mkpa ha dị n'ịntanetị dị ka ichekwa ego, ịzụ ahịa, na njem njem na ha na-atụ anya na data ha ga-anọgide na-eche nche ka ha na-esi n'elu ikpo okwu gaa n'elu ikpo okwu. Site n'inwe afọ ojuju ndị ahịa dị ka ihe kacha mkpa, nchekwa na nchekwa data nwere ike ịdaba na mgbawa. Dabere na Forrester, 25% nke ụlọ ọrụ enweela nnukwute mmebi na ọnwa 12 gara aga. Na